राष्ट्रपतिले लगाइदिइन् प्रधानमन्त्रीलाई टीका, विशिष्टहरूको दसैं फोटोमा !
राष्ट्रपतिले लगाइदिइन् प्रधानमन्त्रीलाई टीका, विशिष्टहरूको दसैं फोटोमा !
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पिता मोहनप्रसाद ओलीबाट टीका लगाएका छन्। ओलीले पत्नी राधिका शाक्य, परिवारजन, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण तथा नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई पनि टीका लगाए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विजया दशमीका दिन मङ्गलबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आफन्तबाट टीका ग्रहण गर्दै। फोटोः रासस
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बडा दसैंका अवसरमा आज शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत विशिष्ट महानुभावलाइ टीका लगाएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओली, उनकी पत्नी राधिका शाक्यसहित विशिष्ट महानुभावलाई टीका लगाएकी हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विजया दशमीका दिन मङ्गलबार राष्ट्रपति कार्यालयमा हनुमानढोकाका मूल पूजारीबाट टीका तथा फूल प्रसाद ग्रहण गर्दै। फोटोः रासस